Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Wararka Australia » Isle of Dead wuxuu helaa 1.3 Milyan
Wararka Australia • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • dhaqanka • Wararka Dowladda • Warshadaha Warshadaha • News • Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka
Maamulka Maareynta Goobta Taariikhda ee Port Arthur (PAHSMA) ayaa dhammaystirtay marxaladdii ugu dambaysay ee mashruuc muhiim ah si loo yareeyo saamaynta booqdaha loona hagaajiyo marin -u -helka caanka ah Isle of the Dead halkaas oo socdaallada xabaalaha aad loogu jecel yahay.
Isle of the Dead, oo ku jiifta biyaha Mason Cove, ayaa ahayd aasaaska aasitaanka saldhigga ciqaabta ee Port Arthur intii u dhaxaysay 1833 iyo 1877.
Waxaa lagu qiyaasaa in ka badan 800 oo dambiilayaal ah ayaa ku dhex jira jasiiradda, badankoodna waxay ku jiraan xabaalo aan calaamad lahayn.
Maanta, booqdayaasha jasiiradda ayaa wali arki kara taallooyin qurxoon oo calaamad u ah qabuuraha shaqaalaha milatariga, saraakiisha xorta ah, haweenka, iyo carruurta.
Dalxiiska ee Isle of the Dead waxay ku kortay adeegyo iyo kaabayaal la hagaajiyay iyadoo la kordhiyay dadaallada ilaalinta si loo ilaaliyo jasiiradda iyo waxyaalaha la hayo. Waa goobta Dhaxalka Adduunka ee UNESCO waxaana lagu ilaalinayaa sharciyada gobolka iyo federaalka Australia.
Maareeyaha Ilaalinta PAHSMA, Pamela Hubert, ayaa tiri: “Mashruucani wuxuu si joogto ah u bixiyaa waddooyinka dhulka hoostiisa leh taxane daawasho oo kor u qaadaya safarada qabuuraha dhintay ee Isle of the Dead. Mashruucan waxaa si taxaddar leh loogu qaabeeyey si loo hubiyo in saamaynta ugu yar ay ku yeelanayso aagagga aaska ee muhiimka ah, walxaha muuqaalka, iyo aragtida jasiiradda. ”
Mashruucani wuxuu bilaabmay 2016, ujeedadiisuna waxay ahayd in la yareeyo saamaynta meelaha qabriga, hagaajinta helitaanka, iyo kor u qaadista waayo -aragnimada booqdaha. Marxaladda kowaad ee mashruuca waxaa suurtageliyey deeq dhan $ 80,000 oo ka timid Barnaamijka Barbaarinta Goobaha Taariikhda Qaranka ee Dawladda Barwaaqo -Sooranka.
PAHSMA waxay iskaashi la sameysay koox ka mid ah shirkadaha Tasmania iyo la taliyayaal mas'uul ka ahaa dhinacyo kala duwan oo shaqada ah: Sue Landscapes Small in designing the walk, Pitt and Sherry for design engineering engineering, Saunders and Ward for steel fabrication and on-site installation, and Abrasive U -qarxinta iyo Rinjiyeynta rinjiga takhasuska leh ayaa dhammaanaya. Iyada oo la shaqeyneysa Duulimaadka Osborne, PAHSMA waxay awood u yeelatay inay u adeegsato helikobtarro si ay hawada sare ugu qaaddo agabka jasiiradda taas oo si weyn u dardar gelisay mashruuca.
“Jidadka cusub ma aha oo kaliya inay kordhiyaan marin u helka iyagoo ku beddelaya jaranjarooyinka jaranjarooyinka, waxay sidoo kale hagaajiyaan waayo -aragnimada booqdaha oo leh aagag daawasho oo wanaagsan iyo goobo lagu ururiyo tours. Waxaa muhiim ah in la qiro in jasiiraddu ay weli tahay meesha ay ku nastaan ​​ku dhawaad ​​1,000 qof mashruucani wuxuu muujinayaa ixtiraamka joogtada ah ee aan u hayno jasiiradda sidii qabuuraha iyo meel laga fikiro, ”ayuu yiri Maareeyaha Qadiimiga PAHSMA Dr. David Roe.
Goobta Taariikhiga ah ee Port Arthur, oo ay weheliso Cascades Goobta Taariikhda Warshadda Dheddig, Goobta Taariikhda Dhuxusha ee Dhuxusha, Saldhigga Tijaabada Darlington ee Jasiiradda Maria, iyo Brickendon iyo Woolmers Estates, ayaa xisaabtamaya 5 ka mid ah 11 -ka goobood ee ka kooban Goobaha Xukunka Australia ee Goobaha Dhaxalka Adduunka.
“Tani waa guul muhiim u ah ilaalinta joogtada ah ee Isle of the Dead,” ayay tiri Ms. Hubert. "Waxaan ku faraxsanahay inaan dhammaystirnay mashruucan oo ay weheliso horumarinta Xarunta Taariikhda iyo Fasiraadda ee Cascades Female Factory furitaanka horraantii 2022, waxay muujineysaa sida PAHSMA ay uga go'an tahay inay hubiso sheekooyinka qasbaya ee taariikhdeena dambiile Australia ah."
Isle of the Dead wuxuu ahaa meeshii loogu talagalay dhammaan kuwii ku dhintay gudaha xeryaha xabsiga. Waa jasiirad yar oo ku ag taal Port Arthur, Tasmania, Australia. Ka dib burburkii dejinta Port Arthur ee 1877, qabuuraha ayaa la xiray, jasiiraddiina waxaa loo iibiyay dhul gaar ah. Tan iyo markii dib loo soo celiyay oo ay maamusho xukuumadda Tasmania.